AWONA MANZI OKUSELA (ESONA SIKHOKELO SOKUGQIBELA SOKUSELA IMPILO EBHETELE) - IMPILO
Awona manzi okusela (Esona sikhokelo sokugqibela sokusela iMpilo ebhetele)
Abantu abaninzi bayasokola ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwamanzi olungcono kuba imarike izele ziintlobo ezininzi ezahlukeneyo. Ngamnye ubanga ukuba unezibonelelo ezongezelelekileyo ezinomtsalane kwezempilo. Nangona kunjalo, ngawaphi la mabango ayinyani kwaye ngawaphi ngaphandle nje kwabakhangisi abanobuqili abolula inyani ukuze bathengise iimveliso ezingaphezulu?
Eli nqaku liza kukunceda uchonge ezona ntlobo zamanzi zifumanekayo namhlanje kwaye sikuxelele ukuba zeziphi izibonelelo zempilo zokwenyani ezisekwe kubungqina besayensi kunye nedatha yophando.
Ekupheleni kweli nqaku uza kube unolwazi olungcono kwaye unoluvo olulungileyo ngala manzi ocinga ukuba afanele iimfuno zakho.
yiba zizimvo zomphathi wakho
Ngawaphi awona manzi aselwayo?
Amanzi empompo luhlobo lwamanzi oluphuma kumbhobho wakho wamanzi. Kwinkoliso yamazwe, ihlala inikezelwa kwaye ilawulwa ngugunyaziwe wasekhaya.
Ngubani olungele yena?
Wonke umntu. Kukhuselekile ngokubanzi kwizinto ezinjengokupheka, ukucoca kunye nokuhlamba impahla.
Ezona zibonelelo zikhulu
Ixabiso eliphantsi, elilula ukufikelela kuninzi lwabantu kwaye ihlala ingumthombo okhuselekileyo wamanzi.
Umngcipheko kunye nemicimbi
Amanzi empompo ngokubanzi kukhuselekile ukusela kodwa ezinye izifundo zamva nje ziphakamisa unobangela wenkxalabo. Umzekelo, i-EWG (iQela eliSebenzayo lokusiNgqongileyo) lenze isifundo seminyaka emi-5 ejonga umgangatho wamanzi empompo ase-US. Iziphumo zibonise ukuba amanzi etepu abonelelwe kuwo onke amazwe angama-50 aqulathe ngaphezulu kwe-500 yokungcola okungafaniyo.
Kukwakho nezinye iimeko apho izimbiwa ezinjenge-fluoride zongezwa kunikezelo lwamanzi oluntu. Umzekelo, malunga ne-10% yabantu base-UK babonelelwa ngamanzi aphuma empompini ukusika ukubola kwamazinyo. Intengiso
Amanzi asebhotileni ngamanzi acocekileyo aphathwayo onokuwafumana ngokulula nangokufanelekileyo nanini na xa unxaniwe.
isidlo sakusasa ukwenza ubusuku obungaphambili
Wonke umntu. Ngumthombo olungileyo wamanzi okusela.
Indlela elula kakhulu yokufikelela kumanzi okusela acocekileyo.
Ezinye zeempawu ezinkulu zamanzi ziye zavuma ukuba amanzi abo asebhotileni ayikho enye into ngaphandle kokucoca amanzi etephu.
Umcimbi omkhulu ziindleko zendalo esingqongileyo. Ukuveliswa kwamanzi asebhotileni kuyinkcitho ngobuhlanya xa kuthatha malunga neelitha ezi-3 zamanzi ukuvelisa ilitha enye.
Kwakhona iiplastiki zinzima kakhulu ukuphinda zisetyenziswe. Oku kuthetha ukuba ibhotile yakho yeplastiki inokugqibela ngokuthatha indawo kwiindawo zokulahla inkunkuma. Okanye okubi, inokuphelela elwandle kwaye ityhefe kungekuphela amanzi kodwa kunye nezilwanyana zasendle.
Amanzi afihliweyo ngamanye amaxesha abizwa ngokuba ngamanzi okanye asuswe amanzi. Ngamanzi asuse yonke into kubandakanya ion kunye neeminerals. Luhlobo olusulungekileyo lwamanzi onokulufumana. Ngokwenene ayinanto kuyo (elungileyo nembi). Oku kuthetha ukuba ayinangcolisi, ibhaktiriya, iiminerali okanye izakha mzimba.Intengiso
Inqanaba eliphezulu lokucoceka kuyenza ibe ngamanzi okhethiweyo kwiindawo ezinje ngeelebhu kunye neefektri. Kulungile ukuba ufuna ukusela amanzi acoceke ngokupheleleyo.
awuyazi into oyenzayo
Amanzi adibeneyo anelona nqanaba liphezulu lokucoceka kwaye iphantse yinyumba.
Akukho bungozi buyingozi bunxulunyaniswa namanzi acocekileyo kuba acocekile. Nangona kunjalo, ezinye iingxelo zezempilo zibonisa ukuba kungangangcono ukuhlala usela amanzi angenanto kwaphela kwizimbiwa ezisempilweni kunye nezondlo.
La ngamanzi aqukethe iimolekyuli zehydrogen ezisebenza njengee-antioxidants ezinamandla. Ibango kukuba ezi molekyuli ziyakwazi ukunceda umzimba wakho ukuba uthothise iiradicals ezinobungozi ezinegalelo kuphuhliso lwezifo, ukunciphisa ukudumba kunye nokucothisa ukuguga.
Abo banolwazi kakhulu ngempilo kwaye bonwabile ukuhlawula imali engaphezulu kwinto enokuba nezibonelelo zempilo- kodwa ingaqinisekiswanga.
IHype ejikeleze amanzi e-hydrogen isekwe kwizifundo ezinzulu ezenziweyo kwiimpuku. Izifundo zibonakala zibonisa ukuba olu hlobo lwamanzi luneziphumo ezinobulali ezichasayo, ngakumbi kuphuhliso lwezifo ezinjengeParkinson's.
Uninzi lwamabango amakhulu ezempilo awanakulinganiswa xa kwenziwe izifundo ezifanayo ebantwini. Nangona kunjalo, amanye amabango ezempilo aboniswa njengeyinyani nangona kungekho ziqinisekiso. Kwakhona, lonke uhlobo lokuhaya lwenza ukuba olu hlobo lwamanzi lubize kakhulu ukuthenga.
Amanzi eAlkaline ngamanzi akwinqanaba le-pH eli-8 nangaphezulu, elingaphezulu kune-pH yamanzi rhoqo. Iye yathandwa ngakumbi kuba uphando lubonisa ukuba ukutya kwealkaline kulungele impilo. Intengiso
Wonke umntu kuba ukusela amanzi anealkali kujongwa njengokukhuselekileyo.
ukutshintsha amakhondo emisebenzi engama-50 ngaphandle kwesidanga
Umzimba womntu uyachuma xa ukwazi ukugcina i-pH ene-alkaline kancinci. Ukuchitha amanzi anealkali kunokunceda kule meko. Nazi ezinye izibonelelo zayo:
Ingxelo evela kuMbutho wezeMpilo weHlabathi ilumkisa ngokuchasene namanzi okusela rhoqo anezimbiwa eziphantsi.Amanzi e-alkaline athanda ukuba sezantsi kwizimbiwa kunye nezondlo.
Ukubilisa amanzi akho yenye yezona ndlela zexabiso eliphantsi nezisebenzayo zokucoca amanzi akho. Kungenxa yokuba ukubeka amanzi kumaqondo obushushu angaphezulu kwe-185 ° F (85 ° C) kuya kubulala uninzi lwezifo ngaphakathi kwemizuzu embalwa.
Wonke umntu. Amanzi abilayo ahlala ecocekile, akhuselekile kwaye asempilweni.
Yindlela elungileyo yokuhlambulula amanzi angangcoliswanga kakhulu.Intengiso
Amanzi abilayo awayi kuwacoca amanzi angcoliswe zizinto ezifana nelothe, i-pesticides, iitrate kunye nezinye iikhemikhali. Kwakhona, abanye abantu abayithandi incasa ethe tyaba ethi ngamanye amaxesha ize namanzi abilisiweyo.
Olona hlobo lwamanzi lusempilweni bubuchwephesha bamanzi e-hydrogen ngenxa yezibonelelo zempilo ezinokubakho kwii-antioxidants eziqulathiweyo.
Nangona kunjalo, inyani yile lolona hlobo lwamanzi lusempilweni lunokuze lube nezibonelelo zempilo ezincinci . Amanzi e-Hydrogen kunye nolunye uhlobo lwamanzi oluluhlu aluyi kuba nakho ukulungisa ukutya okungenampilo okanye indlela yokuphila.
Ezona zibonelelo zibalaseleyo kwezempilo kwi-hydration zivela emanzini okusela ngokwawo nokuba luhlobo luni lwamanzi. Inyani yile yokuba naluphi na uhlobo lwamanzi lulungile kuwe ngalo lonke ixesha licocekile kwaye lingenamdaka.
Eyona nto iphambili kukuba kufuneka uqwalasele zonke iintlobo ezahlukeneyo zamanzi asempilweni kwintengiso 'njengezincedisi zobomi'. Into enokuthi ngokunyanisekileyo iphucule indlela yokuphila kunye nokutya esele isempilweni kakhulu kodwa ingalungisi enye engekhoyo.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: Mnu Water Geek nge mrwatergeek.com
eyona ndlela ilungileyo yokuzilolonga emadodeni
 ^ Iqela elisebenzayo lokusiNgqongileyo: Umbuso wamanzi okusela aseMelika
 ^ Umnxeba: Ubungakanani bokuhamba kwamanzi e-UK
 ^ IZiko lePacific: Iphepha lamanzi asebhotileni kunye naMandla
 ^ I-WHO - Umbutho wezeMpilo weHlabathi: Imingcipheko yezeMpilo ukusela amanzi angcolileyo
 ^ Uphando ngeGesi yoNyango: Ukusela Amanzi e-Hydrogen ... Thintela i-6-Hydorxydopamine-Ebangelwa sisifo sikaParkinson kwiRats.
 ^ Ijenali yezeNdalo kunye neMpilo yoLuntu: Ukutya okuneAlkaline: Ngaba bukhona ubungqina bokuba ukutya kweAlkaline pH kuyanceda kwiMpilo?
 ^ Ubomi Ionizer: Izibonelelo ezi-3 zaManzi eAlkaline esekwe kuPhando lweKlinikhi
Uyenza njani iwebhusayithi eyiyo
indlela yokudlula kwiwebhusayithi evaliweyo
imidlalo emnandi yabantu abadala zokusebenza
uyicoca njani imemori yangaphakathi ye-android
ungamthemba njani umlingane kwakhona
iimpawu zenkokeli embi
Imisebenzi Yosapho Diy Ubuhle Umsebenzi Weengcebiso Ngamakhondo Imveliso